Enga anie tsy ho resaka « Claudine » !
Ny tatitry ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra natao ny alarobia teo no nahitana didim-panjakana iray izay manendry an’Ingahy Andriamiseza Charles, izay minisitra teo aloha nitantana ny departemantan’ny fitsarana sady nisahana koa ny fitehirizana ny fitombokasem-panjakana, ho lehiben’ny fampanoavana ambony eo anivon’ny fitsarana ambony eto Antananarivo.
Nanaitra ny maro izany ka nahalasa fisainana ny betsaka hoe « nahoana no avy minisitra dia miverina ho lehiben’ny fampanoavana ambony fa tsy farafaharatsiny lehiben’ny fampanoavana any amin’ny fitsarana tampony ? »
Ny antony voala moa aloha dia hoe « handeha hisotro ronono Ingahy Randrianasolo Jacques, izay nisahana an’io fampanoavana ambony io ka banga ny toerany ».
Fa etsy ankilan’izany, tsy tana ny sain’ny maro fa lasa any amin’ny hoe raha tsy diso ny fahatsiarovana dia Ingahy Andriamiseza Charles, fony izy minisitra ny Fitsarana no nampiantso mpanao gazety vitsivitsy notsongaina tao anatin’ny maro, ka nitafany tamin’izy ireo tamin’ny 11 ora alina teny amin’ny trano fiasany eny Faravohitra, taorian’ny nahazoany baiko avy eny an-dapa. Nifototra tanteraka tamin’ny fanazavana ho fanadiovana an-dRtoa Razaimamonjy Claudine ny resany tamin’izany.
Dia izay tranga izay no mitamberina ao an-tsain’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena hoe sao àry sanatriavina ka ny hanatanteraka ny asa fanadiovana sy ho fanafahana an-dRazaimamonjy Claudine no tena nandefasana an’Ingahy Andriamiseza Charles ao anivon’io sehatry ny fampanoavana ambony io ?
Ny tena tanjona amin’izany aloha dia ny hamelana ho tsy misy pentina an’ireo tompon’andraiki-panjakana ambony efa fantatra fa tompon’ny fanapahana rehetra ka nahatonga an-dRazaimamonjy Claudine ho isan’ny mpiray tsikombakomba tamin’izay mahavoarohirohy azy amin’izao fotoana. Misy minisitra voatonona mantsy amin’io raharaha io, sy ny hafa.
Dia hoy ny tomban’ny maro hoe « enga anie ka mba tsy ho resaka Claudine » tokoa io !